TomàsBigordà | | ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်, ပတ်ဝန်းကျင်
En တရုတ်ကပိုစျေးပေါလျှပ်စစ်ကားများရောင်းချနေသည် အတူတကွတစ်ကမ္ဘာလုံး၌သော။ သတင်းအေဂျင်စီတော်တော်များများကလည်းဒီအကြောင်းကိုကိုးကားဖော်ပြသည် အောင်ပွဲခံကြောင်းမော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား နှင့်သူတို့၏အကြောင်းပြချက်၌တည်၏.
ဤကဲ့သို့သောအမေရိကနှင့်မြောက်ဥရောပကဲ့သို့သောအခြားစျေးကွက်များနှင့်မတူဘဲအာရှနိုင်ငံရှိဤနည်းပညာကိုမြှင့်တင်နေသောမော်ဒယ်များ ၎င်းတို့သည်တရုတ်တံဆိပ်များဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည် ထိုကဲ့သို့သော Tesla သို့မဟုတ် Nissan ကကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံခြားထုတ်လုပ်သူထက်။
လျှပ်စစ်ကားများဟာအဖြစ်မှန်တစ်ခုပါ။ မကြာသေးမီအချိန်က၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် ယာဉ်မောင်းများတိုးများလာရန်အတွက်အပြည့်အ ၀ ခိုင်လုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ကားဂိုဒေါင်တွင်ဆက်သွယ်မှုအမှတ်ရှိရန်နှင့်အားပြန်သွင်းရန်အတွက်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ထက်ပိုသောခရီးကိုမသွားရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်ရှိသည်။
မြို့ကြီးများသည်စျေးပေါသောလျှပ်စစ်ကားများ၏သဘာဝကျသောနေရာဖြစ်သည်။ မြို့ပြလမ်းကြောင်းများတွင်၎င်းတို့သည်ပြတ်သားသောလက်နက်ဖြစ်သည် ဂီယာမပြောင်းဘဲသွက်လက်စွာမောင်းနှင်နိုင်မှုနှင့်မီးခိုးကင်းမဲ့မှုတို့ကြောင့်သူတို့၏တိတ်ဆိတ်မှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့ကြောင့်သူတို့သည်အလွန်သာလွန်သည်ကိုပြသသောကြောင့်လောင်ကျွမ်းသောကားဟောင်းများကိုရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်ဟောင်းများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အားမြင်စေလိမ့်မည်။
1.1 ချယ်ရီ eQ
El Chery eQ သည်ရှန်ဟိုင်းတွင်ယွမ် ၆၀၀၀၀ ကုန်ကျသည်၏အနီးစပ်ဆုံးညီမျှ ယူရို ၁၀၀ ထက်နည်းနည်း ထောက်ပံ့ငွေနှင့်အတူ။ ဤအကူအညီများမရရှိပါကယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယူရို ၁၃၆၀၀ ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။
General Motors (GM) သည်၎င်း၏အသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည် Chevrolet မူလီ, Que အကြောင်းကို $ 30.000 ကုန်ကျသည် $ 7.500 တစ်ခုပါဝင်သည်ဖက်ဒရယ်ခရက်ဒစ်ပြီးနောက်။
ရှန်ဟိုင်းဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီမှအလုပ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်သူ Xie Chao က“ တရုတ်ပြည်မှာစျေးပေါတဲ့လျှပ်စစ်ကားတွေအရမ်းစျေးပေါတယ်၊ မင်းသူတို့ကိုလိုအပ်တယ် တစ်ခုဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံနည်းနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ကားကိုသာအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်မြို့ပတ်လည်တွင်သွားရန်၎င်း၏ကားထက်အနည်းငယ်နည်းသောကားကိုသာလိုလျှင် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီ"။
Xie က ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းကစျေးပေါသောလျှပ်စစ်ကား ၃ စီး ၀ ယ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် Anhui Jianghuai မော်တော်ယာဉ် iEV4, un BAIC EV160 နှင့် Geely Emgrand EVတစ် ဦး သည်သူ၏အတွက်ဇနီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ငှားရန်။ မယုံ။
EVBuy ၏ဖြန့်ချိရေး၏စီအီးအို Zhang Dawei က“စျေးပေါဆုံးလျှပ်စစ်ကားများသည်လည်းအလားတူသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းကအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ eQ အီးဖြစ်ခဲ့သည်ဌအရောင်းရဆုံး မကြာသေးမီလများအတွင်းက "အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေးရှိသော" “ ဒါကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတွေပါ။ သူတို့ဟာရွေ့လျားသက်သက်သာမဟုတ်ပါ ဝါကြွားရန်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုတပ်ဆင်သည် "ဟုသူကနိဂုံးချုပ်ပြောကြားသည်။
အချို့အာရှစျေးကွက်လေ့လာသုံးသပ်သူများကလည်းထောက်ပြသည် ကြီးမားသောမြို့ကြီးများ၏နေထိုင်သူများကြောင့်ဒီစန်းအတွက်အချက်တစ်ချက်အဖြစ် တရုတ်အမျိုးသမီးများသည်ဤကားများကိုရွေးချယ်သည် အလွယ်တကူလိုင်စင်ပြား။ ထို့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတစ်ဒါဇင်ကျော်ခန့်သည်ညစ်ညမ်းမှုပြissuesနာများအတွက်ဓာတ်ဆီကားများ၏လိုင်စင်ပြားများကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်စျေးပေါသောလျှပ်စစ်ကားများအားပါမစ်များအခမဲ့ပေးကြသည်။
အခြား ဤစျေးပေါသောလျှပ်စစ်ကားများတရုတ်ပြည်တွင်ကြုံတွေ့နေရသောစန်းကိုရှင်းပြရန်သော့ချက်များ မုသာစကားကို, တဖန်၌တည်၏ ထောက်ပံ့ကြေးမူဝါဒ။ ထို့အပြင်နိုင်ငံခြားထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးအစားကိုရယူရန်ခက်ခဲသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ဒေသခံမိတ်ဖက်များနှင့်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများမှတဆင့်လည်ပတ်လျှင်၎င်းကိုသူတို့ရရှိရန်သာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် Denza, ဂျာမန်အုပ်စု Daimler ထောက်ခံပါတယ်။
မင်းရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်မင်းရဲ့အကူအညီ စျေးနှုန်း၏နေဆဲကောင်းစွာနေဆဲဖြစ်ပါတယ် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၌ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချခြင်းသည်အစီရင်ခံစာများအရအမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုကိုမဖြေရှင်းဘဲ နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာမဖြစ်ပျက်ဘူး။
ယခုအခါလေ့လာသုံးသပ်သူအားလုံးကသူတို့၏စီးပွားရေးပုံစံကိုပေါင်းစည်းလိုက်သည်နှင့်တဖြည်းဖြည်း၎င်းများဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည် အသစ်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ se လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ချဲ့ထွင်။ သော်လည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာဒက်ထရွိုက်တွင်၊ GAC မော်တာ (ကွမ်ကျိုးမော်တော်ယာဉ်အုပ်စု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ကယင်းကိုပြခဲ့သည် အသစ်က GE3 လျှပ်စစ်အားကစား utility ကိုမော်တော်ယာဉ်။ ထိုတွင်သူကသူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်သို့ယခုနှစ်အတွင်းဝင်ရောက်ရန်အစီအစဉ်ရှိသော်လည်းအဆုံးတွင်သူသည် 2017 အထိနှောင့်နှေးမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
BenBen သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းဗားရှင်းတွင်တရုတ်ပြည်၏အရောင်းရဆုံးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုဒီဇင်ဘာလတွင်ကုမ္ပဏီ၏လျှပ်စစ်ဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုမ္ပဏီကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည် ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ နှင့်စျေးနှုန်း 8.200 ယူရို.
Jingyi S50 သည် Dongfeng Motors မှထုတ်လုပ်သည့် sedan ဖြစ်သည်။ တနည်းကား၊ ၎င်းသည်၎င်း၏လောင်ကျွမ်းခြင်းဗားရှင်းတွင်အလွန်လူကြိုက်များသောကားတစ်စီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုတွင်မူလျှပ်စစ်ဗားရှင်းပေါ်လာသည်။ တစ် ဦး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အတူ ၁၂၀၀ ကီလိုမီတာ နှင့်စျေးနှုန်း 16.400 ယူရို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » တရုတ်နိုင်ငံတွင်လျှပ်စစ်ကားများမြင့်တက်လာခြင်း
သဘာဝအကြောင်းကိုလူ ဦး ရေရဲ့အကြီးအမသိဘဲ